तपाइँले कतै शेयर बजार बारे नवुझिकन नै लगानी गर्नुभएको छ छैन ? यस्ता छन् सेयर बजार बुझ्न जान्नुपर्ने २७ बुँदा ! - सुनाखरी न्युज
२०७६ माघ १४ , मंगलबार
तपाइँले कतै शेयर बजार बारे नवुझिकन नै लगानी गर्नुभएको छ छैन ? यस्ता छन् सेयर बजार बुझ्न जान्नुपर्ने २७ बुँदा !
Posted on: September 29, 2019 - 3:01 pm
धितोपत्र बजारमा प्रवेश गरेकाहरु सबैले धितोपत्र बजारबारे सम्पूर्ण कुराहरु जानेका हुन्छन भन्ने हैन । तपाइँले कतै शेयर बजार बारे नवुझिकन नै लगानी गर्नुभएको छ छैन ?
कतिपय मानिसहरु साथीभाईको लहलहैमा लागेर पनि सेयर कारोबारमा हात हाल्छन् । तर, बजारसम्बन्धि सामान्य कुराहरु नबुझ्दा आफूलाई निकै पछाडि परेको महशूस गर्छन् । त्यस्तै, कतिपय मानिसहरु धितोपत्र बजारबारे आवश्यक जानकारी नहुँदा बजारमा छिर्ने रहर मनमै पालेर बसेका हुन्छन् । तपाईँको यस्तै समस्या र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बैँकिङ खबर डट कमले धितोपत्र बजारसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण शब्दावलीहरुबारे प्रकाश पार्ने जमर्को गरेको छ ।
लाभांश र बोनश सेयर
कम्पनीले आर्जन गरेको नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई दिइने प्रतिफल नै लाभांश हो । यस्तो लाभांश नगदमा दिइएमा नगद लाभांश भनिन्छ भने सेयरमा दिएमा बोनश सेयर वा स्टक डिभिडेन्ड भनिन्छ । कम्पनीको बचत वा जगेडाकोषलाई पूँजीकरण गर्नका लागि विद्यमान सेयरवालाहरुलाई यस प्रकार थप सेयर९बोनश सेयर० प्रदान गरिन्छ वा चुक्ता पूँजी वृद्धि गरिदिन्छ । लाभांशको परिमाण सञ्चालक समितिद्वारा निर्णय गरिन्छ ।
तोकिएको दर र समयमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने शर्तमा जारी गरिएको धितोपत्रलाई डिवेञ्चर भनिन्छ । यसको अंकित मूल्य साधारणतः १ हजार रुपैँया हुन्छ । डिवेञ्चरवालाहरुले आफूले गरेको लगानी रकममा तोकिएको दरमा वार्षिक वा अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज प्राप्त गर्दछन् । साधारण सेयर र अग्राधिकार सेयरमा लाभांश दिनु अघि नै डिवेञ्चरवालाहरुले ब्याज प्राप्त गर्दछन् । संगठित संस्था नोक्सानीमा गए पनि डिवेञ्चरवालाहरुले तोकिएको ब्याज प्राप्त गर्न कुनै वाधा पर्दैन । डिवेञ्चरवाला र संगठित संस्थाको सम्बन्ध साहु र ऋणीको जस्तो हुन्छ । यदि, कम्पनीले तोकिएको दर र समयमा ब्याज प्रदान गर्न असमर्थ भएमा डिवेञ्चरवालाहरुले कम्पनी खारेजीमा पठाउन कार्यवाही चालाउन सक्छन् । प्रायः जोखिम लिन नचाहने लगानीकर्ताहरु डिवेञ्चरमा लगानी गर्न रुचाउँछन् । डिवेञ्चरवालाहरुलाई कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुने अवसर र मतदान अधिकार प्राप्त हुँदैन । डिवेञ्चरहरु सुरक्षित ९कम्पनीको सम्पत्ति जमानत वा बन्धक राखी निष्काशन हुने० वा असुरक्षित, विमोच्य ९निश्चित समयावधि पछि फिर्ता भुक्तानी दिइने० वा अविमोच्य र परिवर्तनशिल ९निश्चित समयावधि पछि साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न सकिने० वा अपरिवर्तनशील प्रकृतिका हुन्छन् ।
कुनै सम्भावित खरीदकर्ताले तिर्न चाहेको धितोपत्रको मूल्यलाई प्रस्तावित मूल्य ९इााभच एचष्अभ० भनिन्छ । धितोपत्र बजारको कारोबार पाटीमा धितोपत्र दलालहरुद्वारा अंकित गराइएको द्यष्म एचष्अभर इााभच एचष्अभ मिलेपछि धितोपत्र खरीद बिक्री कारोबार सम्पन्न हुन्छ ।
सूचीकृत धितोपत्रहरुको आजको कूल बजार मूल्य र कुनै आधार वर्षको कूल बजार मूल्य बीचको अनुपात नै बजार परीसूचक हो । सूचीकृत धितोपत्रहरुको मूल्य बढेमा यो परिसूचक बढ्दछ भने घटेमा घट्दछ । नेपालमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लि। ले प्रत्येक दिन यस प्रकारको परीसूचक तयार गर्दछ, जसलाई नेप्से परिसूचक ९लभउकभ ष्लमभह० भनिन्छ ।
कम्पनीले आर्जन गरेको खुद नाफालाई कम्पनीको कूल सेयर संख्याले भाग गर्दा प्रतिशेयर आम्दानी प्राप्त हुन्छ । प्रतिसेयर आम्दानीले सेयरवालाहरु तथा कम्पनी भन्दा बाहिरका ब्यक्तिहरुका लागि नाफाको महत्वपूर्ण माप ९mभबकगचभ० प्रदान गर्दछ । प्रतिसेयर आम्दानी बढ्दै गएको कम्पनीलाई कार्य सम्पादनमा सफल कम्पनी मानिन्छ भने प्रतिसेयर आम्दानी घट्दै गएमा समस्याको लक्षण मानिन्छ ।
धितोपत्रको उन्नतोन्मुख बजार ९दििग mबचपभत० भन्नाले बजारको क्रमिकरुपमा उभो लाग्दै गरेको स्थितिलाई जनाउँछ । यस प्रकारको बजारमा उद्योग, बैकिङ्ग, बीमा लगायत अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रको सुधार सँगसँगै कम्पनीमा कुशल ब्यवस्थापनका कारण नाफामा क्रमशः वृद्धि भएको हुन्छ । यस वेला सूचीकृत कम्पनीहरुको सेयरको मूल्य बढी रहेको हुन्छ । अर्कोतर्फ धितोपत्रको अधोन्मुख बजार भन्नाले बजारको गिर्दो अवस्थालाई जनाउँछ । यस स्थितिमा सूचीकृत धितोपत्रहरुको बजार मूल्य र बजार परीसूचक घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको हुन्छ र लगानीकर्ताहरुमा निराशाको वातावरण रहन्छ ।
करिब २० महिनाको रेकर्ड तोड्दै शेयर बजार परिसूचक नेप्से १३ सय ४३ को बिन्दुमा, घट्ने बद्ने क्रममा
एनआईबिएल एस क्यापिटल नेपाल इन्फ्रास्ट्रचर बैंक लिमिटेडको बिक्री प्रबन्धक
गण्डकी विकास बैंकको १७.३२ प्रतिशत लाभांश पारित
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको ३३औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न